မသေခင် ဖြည့်ဆည်းရမည့် ဘ၀အရည်အသွေးများ ~ Nge Naing
မသေခင် ဖြည့်ဆည်းရမည့် ဘ၀အရည်အသွေးများ
Wednesday, October 28, 2009 Nge Naing 31 comments
အခုတလော ကျွန်မတို့ ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေကြားမှာ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာပျက်မည့် အကြောင်းအရာတွေက သိပ်ပြီးဟိုးလေး ကြော်ကြော် ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်မကိုလည်း ကိုအောင်သာငယ်က tag ထားတာ ရှိပြီး ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျွန်မ တိတိကျကျ မလေ့လာရသေးတဲ့အတွက် ဘာမှ ရေရေရာရာ မသိသေးလို့ အခုလောလောဆယ် မရေးဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းလူတိုင်းက ကမ္ဘာပျက်သည်ဖြစ်စေ၊ မပျက်သည်ဖြစ်စေ တနေ့မှာ သေမယ်ဆိုတာ သေချာတဲ့အတွက် မမျှော်လင့်ပဲ ရောက်လာတဲ့ Forward အီးမေးလ်လေးက သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း တစုံတရာ အကျိုးပြုမယ်ထင်လို့ ပို့စ်တခုအဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။ "မြတ်စွာဘုရားရှင်က “မသေခင် သုတ္တန်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ “ပုရောဘေဒ သုတ္တန်” မှာ မသေခင် ဖြည့်ဆည်းရမယ့် ဘ၀ အရည်အသွေး တွေကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဟောကြားထား ပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ လူသားတိုင်းနဲ့ မြင့်မြတ်လိုတဲ့ လူသားတိုင်း မဖြည့်မဖြစ် ဖြည့်ဆည်းရမယ့် စိတ်ဓါတ် အရည်အသွေး၊ ဘ၀ အရည်အသွေးတွေ ဖြစ်လို့ အကျဉ်းဆုံး ချုပ်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်" လို့ အစချီပြီး ရေးထားတဲ့ Forward e-mail ကို သူ့မူရင်းအတိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးသော ဓမ္မမောင်နှမတို့ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ မြဲမြံသော သတိတရားတို့ဖြင့် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ (ဖိုးသား)
(Forward e-mail ကို တိုက်ရိုက် ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Forward mail ကို ကိုဇာနည်မောင် က ပို့လာပြီး အဖြူရောင်မေတ္တာ ဘလော့ဂ်မှာ ဖိုးသားက ဒီပို့စ် ကို ရေးထားတာ နောက်မှ တွေ့ရပါတယ်။ ပို့ပေးသူ ကိုဇာနည်မောင်ကိုရော မူလရေးသူ ဖိုးသားကိုပါ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
October 28, 2009 at 11:36 AM Reply
ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ မငယ်နိုင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ကျမလဲပြန်လည်ကူးယူ
October 28, 2009 at 12:13 PM Reply
လူတွေသာ တကယ်လိုက်နာကြရင် ကမ္ဘာကြီး ဘယ်လောက် ငြိမ်းချမ်းလိုက်မလဲနော်...။
October 28, 2009 at 12:28 PM Reply
ကိလေသာ နဲ့ တဏှာ ကင်းဖို့ ၊မသေခင် လုပ်သင့်တာ ၊ ဆောင်သင့်တာ ၊ ရှောင်သင့်တာ ။ နဲ့လက်ရှိဘဝကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီး နောက်ဘဝ အတွက် ပြင်ဆင်ထားရမဲ့ အချက်တွေ ကို တင်ပြ သတိပေးထား တဲ့ အကြောင်းများ မှတ်သားသွားပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်အောင်တော့ အတော်လေး ကြိုးစားရအုံးမယ် မငယ်နိုင်ရေ ...။တနေ့တနေ့စက်ရုပ်လို လှုပ်ရှားနေရတော့ လူစိတ်တွေတောင် ပျောက်သလို ဖြစ်နေတယ် ။း(
October 28, 2009 at 1:45 PM Reply
ဆရာတော် ရေးထားသမျှ အချက်တွေ အားလုံးမှတ်သား ဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းပါတယ် မငယ်နိုင်ရေ..
October 28, 2009 at 2:27 PM Reply
လာဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လိုပါသေးလား ဆိုတာ သိသွားပါတယ် အမရေ...။
October 28, 2009 at 3:03 PM Reply
၂၀၁၀မှာကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်နေတဲ့ ဗေဒင်နက္ခတ်သိပ္ပံကြောင်တွေကိုပါထိစေတယ်ဗျ...
ဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမသြဝါဒတွေကို လေးစားကြည်ညိုစွာဖြင့် နာခံသွားပါကြောင်း.မငယ်ရေ
October 28, 2009 at 3:05 PM Reply
မှားလို့ ၂၀၁၂မှာ...၂၀၁၀မှာပျက်မှာက ဟိုလူကြီးတွေ..
မှတ်သားလိုက်နာစရာ တရားစာများကို ဖတ်ရှု ကူးယူသွားပါတယ်။
October 28, 2009 at 5:18 PM Reply
မငယ်ရေ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါပဲ သတိတရားတွေအများကြီးရစေပါတယ်
October 28, 2009 at 6:54 PM Reply
ဆရာတော်ရဲ့ ဆုံးမသြဝါဒတွေကို ဖတ်ရှု ကူးယူသွားပါတယ်။
အခုလို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ။
October 28, 2009 at 7:16 PM Reply
အဲ့လိုနေမယ်လို့တော့ တရားစာ ဖတ်တိုင်း တရားနာတိုင်း တွေးတယ်။
နည်းနည်းပါးပါးတော့ ဆင်ချင်တဲ့ခါ ဆင်ချင် မိတယ်။
မအယ်မှာက သတိက အမြဲရှိမနေဘူး ဆိုရမယ်။
October 28, 2009 at 7:59 PM Reply
ဒီပို့စ်ကို လာဖတ်ပြီး ကုသိုလ်ယူသွားကြသူ အားလုံးကို မူလစာရေးသူ ဖိုးသားနှင့် ကျွန်မကို Forward mail က တဆင့် ပို့ပေးလာသူ ကိုဇာနည်မောင်တို့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီတရားကို ဟောခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့ ပါဋ္ဌိလိုကနေ သာမန်လူတွေနားလည်အောင် ပြန်ဟောပြော ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒိဓိကကိုလည်း သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ဒီအထဲက ဆုံးမတွေကို လိုက်နာနိုင် မနိုင်ဆိုတာကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အကျင့်သီလ၊ အားထုတ်မှု၊ လူ၊ သတ္တ၀ါတွေအပေါ် ထားနိုင်တဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဂရုဏာအပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အားထုတ်မှု ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တရားစခန်းဝင်ပြီး တရားသွားထိုင်တာကိုပဲ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပဲ မိမိနိုင်သလောက် ည/မနက် တရားမှတ်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ စိတ်ကို မပျံ့လွင့်စေပဲ မိမိစိတ်ကို လောလောဆယ် မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာပဲ သတိလေးကို ထားထားရင်လည်း ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ကို ရှုတာပဲ ဖြစ်လို့ တရားမှတ်တာနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။
ကိုဆောင်းယွန်းလ ပြောတဲ့ လုပ်ကြံလှုံ့ဆော်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်ကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေယ့် သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်နဲ့ ကောလဟာလ တဘောင်တွေကို မရောထွေးစေဖို့တော့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်တဲ့ကိစ္စက ကျွန်မသိရသလောက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ထားတဲ့အချက်လို့ သိရတယ်။ ဖြစ်နိုင်မနိုင်ဆိုတာ မသေချာပေမယ့် နေအဖွဲ့အစည်းပိုင်နက်အတွင်း အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ဂြိုလ်တခု သူ့ပတ်လမ်းကြောင်း မဟုတ်ပဲ ရောက်နေတယ်ဆိုတာတော့ သတင်းမှာ ပါဖူးတယ်လို့ သိရတယ်။ ရူပဗေဒနဲ့ အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ အဲဒီဂြိုလ်ရဲ့ အရွေ့နှုန်း၊ အရှိန်နှုန်းတွေကို အလင်းနဲ့ တိုင်းပြီး တွက်ချက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ အထက်တန်းအဆင့် ရှုပဗေဒ သင်ဖူးသူတိုင်း သိနိုင်ပါလိမ့်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က ဟေလီကြယ်တခွန်ကြီး ဖြတ်သွားတာကို ဘယ်အချိန်မှာ ကမ္ဘာကနေ ကြည့်လို့မြင်တွေ့ရမယ် ဆိုတာ တွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်း ဟေလီကြယ်တခွန်ကြီးဟာ တကယ်ပဲ အဲဒီနေ့မှာ ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း မကြာခဏ နေဘယ်အချိန်ကြပ်မယ်၊ လဘယ်အချိန်ကြပ်မယ်ဆိုတာ နေပတ်လမ်း၊ လပတ်လမ်းကို တွက်ချက်လို့ ရသလို အခုကမ္ဘာကို ၀င်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂြိုလ်ကြီးကိုလည်း တွက်ချက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ သတင်းမကြည့်တာ ကြာလို့ အတိအကျ မသိပေမယ့် သိတဲ့သူတွေက အဲဒီဂြိုလ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဖေါက်ခွဲနိုင်အောင် နည်းလည်း ရှာနေတယ်လို့ သတင်းမှာ တခါလာဖူးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဟာ တပေါင်လိုလို ဗေဒင် လက္ခာအရ မဟုတ်ပဲ Scientific Investigation တခုဖြစ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လုံးဝပြောလို့မရတဲ့ အထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ကိုဆောင်းယွန်းလက တဘောင်နဲ့ ရောမှာစိုးလို့ ကျွန်မဆွေးနွေးတာပါ။
October 28, 2009 at 10:00 PM Reply
မငယ်နိုင်ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ.. မသေခင်ဖြည့်ဆည်းသင့်တာ
ဒါပေမဲ့ ခုနလေးတင်ပဲ ဆရာမမေငြိမ်းဘလော့ဂ်
ဖတ်ပြီးစိတ်မရွှင်လန်းရတဲ့ အထဲ အမက
ထပ်ပြီး scientific investigation ဆိုပြီး ပြောနေတာ စိတ်ညစ်တယ်။ ကျွန်တော်က
October 28, 2009 at 11:06 PM Reply
တရားစာတွေ လာဖတ်သွားတယ် မငယ်နိုင်၊ အားပေး
October 29, 2009 at 10:27 AM Reply
ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောလာသူ မြတ်လေးငုံ၊ စိမ်း၊ မေသစ္စာမောင်နဲ့ ဖြိုးအောင်တို့ကို မူလရေးသားသူ ဖိုးသားနဲ့ ပို့ပေးသူ ကိုဇာနည်မောင်တို့ကိုသာ ကျေးဇူးတင်ဖို့ ညွန်းပေးပါရစေ။
ဖြိုးအောင်ရေ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ ကမ္ဘာပျက်တယ်ဆိုတာ သာသနာတွေပျက် လူတွေက သုံးစားလို့မရလောက်အောင် ဆိုးသွမ်းအောက်တန်းကျနေ တရားပျက်နေကြတဲ့ အချိန်မှပဲ ပျက်ပါတယ်လို့ သိရတယ်။ အခုကမ္ဘာာကြီးမှာ သူတော်ကောင်းတွေ၊ ဘာသာခြားတွေမှာလည်း စိတ်စေတနာ သိပ်ပြီးပြည့်ဝသူတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ လူတိုင်း စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်း ထားရင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ တွက်ချက်တွက်ချက် ကမ္ဘာာမပျက်ပါဘူး။ သူများကောင်းဖို့ မကောင်းဖို့ထက် ကိုယ်တိုင်ကောင်းဖို့တော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်ကြမှာပဲ။
မသေခင်ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတော့ .. အသက်ရှူရမှာပေါ့တဲ့ .. ဘုန်းဘုန်းက ပြောခဲ့တယ် ..
ကျနော်ရော ... ???
October 29, 2009 at 7:58 PM Reply
လူဆိုတာ တနေ့မှာသေကြရမယ်ဆိုတာသိ ပေမဲ့လဲ ကိုယ်ကခုထိ ကိလေသာထဲဝဲလဲလဲနဲ့ အပြိုင်ဆိုင်တွေကြားမှာ မောပမ်းတုန်းပဲ
October 29, 2009 at 11:42 PM Reply
(ထစ်ကနဲရှိ ဒေါသ ထွက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူလည်း တစ်နေ့သေ၊ ကိုယ်လည်း တစ်နေ့သေမယ့်ကိစ္စ ဘာလို့ဒေါသ ထွက်နေဦးမှာလဲ။)
အဲဒီအချက်လေးတော့ လိုက်နာနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
October 30, 2009 at 12:19 AM Reply
29 Oct 09, 17:09
အဖြူရောင်မေတ္တာ: အစ်မ ငယ်နိုင်ရေ.. အစ်မ ကွန်မန့်ရေးတဲ့နေ့ကတည်းက ကျွန်တော်ရောက်တယ်.. စိဘောက်မှာ ရေးဖို့ မေ့သွားတာ.. အစ်မဆီမှာ လာရေးကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ပြီး ကြည်နူးမှုတွေလွန်လို့ မေ့သွားတာ အစ်မရေ.. ခုတစ်ခါတော့ ဒုတိယမ္မိ ရောက်တာပေါ့ အစ်မ.. လာရောက်ဖတ်ရှုတယ် ဆိုတာ သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် အစ်မရေ..
ဒီပို့စ်ရဲ့ မူလပိုင်ရှင် ဖိုးသားက မှတ်ချက်နေရာမှာ မရေးပဲ C-Box မှာ လာရေးထားလို့ ဒီမှာ ထည့်ထားပေးလိုက်တယ်။
ဇော်ရေ လူတွေမှ မဟုတ်ဘူး အပင်တွေကအစ ဘက်တီးရီးယားတွေလို ပိုးမွှားတွေလည်း အသက်ရှူတာပဲ။
မခင်ဦးမေရေ- ကိလေသာ ရှိလို့သာ ဘ၀ကို ရကြတာ ဖြစ်လို့ ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေကလွဲရင် ဘယ်သူမှ မကင်းပါဘူး။ အလွန်အကျွံ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
Rita- အစ်မလည်း အတူတူပဲ ဒါပေမယ့် အကုသိုလ်မှန်းသိလို့ အခုတော့ တော်တော်ထိန်းလာပြီ။
October 30, 2009 at 1:36 AM Reply
လာဖတ်သွားတယ်.... သူများရေးထားတဲ့ကော်မန့်တွေက အတော်လေးပြည့်စုံနေပြီမို့ ထပ်မမန့်တော့ဘူးနော်...
October 30, 2009 at 5:48 AM Reply
အပေါ်က khin oo may က အစ်မ မဟုတ်ပါ။ အတော်စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဘာသဘောနဲ့ တို့နာမည်နဲ့လိုက်ပြီး ကွန်မက်ပေးနေတာလဲ ဆိုတာ ကို အတော်စိတ်ကုန်နေပါပြီ။ တွေးလဲ မတွေးတတ်တော့ပါဘူး။ ယုဝရီဆီမှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။
October 30, 2009 at 6:37 AM Reply
မခင်ဦးမေ အတုရော၊ အစစ်ပါ တကယ်လို့ နှစ်ယောက်စလုံး အတုဖြစ်နေရင်တောင်မှ ကျွန်မပေးချင်တဲ့ message ဖြစ်တဲ့ ဘုရားဟောတဲ့တဲ့ တရားကို ဖတ်သွားကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း သူများဘလော့ဂ်မှာ နာမည်အတုနဲ့ တခါမှ သွားမရေးဖူးလို့ နောက်တခါ မှတ်ချက်ပေးရင်တော့ သူတပါးကို မထိခိုက်အောင် မိမိနာမည်အမှန် ဒါမှမဟုတ် အမည်မဖေါ်ချင်ရင်လည်း မဖေါ်ပဲ ရေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Rose ရေ လာဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတရားတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် သက်သက်မဟုတ်ပဲ ဘာသာမခြား လူသားအားလုံးအတွက်လည်း အကျုံးဝင်တာ အမှန်ပဲ။
October 30, 2009 at 6:54 AM Reply
အမရေ ကျနော် လာရောက် သေချာ ဖတ်ရှု သွားပါတယ် ..အမရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စီတ်ဓာတ်ကိုလဲ ထပ်တွေ့ပါတယ်..ဝမ်းသာမိပါတယ်..
မခင်ဦးမေ နာမည်ခံပြီး ၀င်ရေးသွားသူကို ပြောချင်တာက ကိလေသာထဲမှာ တ၀ဲလည်ဖြစ်နေတာ မခင်ဦးမေ တယောက်တည်း ဟုတ်ပါဘူး၊ အခုပြောတဲ့သူ အပါအ၀င် ကျွန်မတို့ ဘ၀ကိုရထားသူ မှန်သမျှ ပုထုစဉ်တွေ အကုန်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းက သူ့အသွင် သူဆောင်၊ ကိုယ့်အသွင် ကိုယ်ဆောင်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ တစုံတယောက်က သူပျော်သလိုနေတာကို အများအတွက် အန္တရယ်ရှိတယ်၊ ထိခိုက် နစ်နာ နေတယ်ဆိုရင် ပြဿနာရှိလို့ ဒါကို နည်းမှန်လမ်းမှန် အဖြေရှာပြီး ရပ်တန်းအောင် လုပ်ဖို့လိုမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ပဲ သူများရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှု ပုံစံနဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို မိမိတဦးတည်းရဲ့ စိတ်ထားမတတ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ အမြင်ကပ် ပုဒ်မနဲ့တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ သွားပြီး Assault လုပ်လို့ မသင့်လျော်ပါဘူး။ သူများကို ဒီအချက်မှာ မကောင်းဘူးလို့ မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘာမှ ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ မကောင်းဘူး ထင်တာကို မိမိ မလုပ်မိအောင် ရှောင်ကြဉ်ပြီး မိမိက ကောင်းတယ်ထင်တာကိုပဲ မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင် ကြိုးစားဖို့သာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစကားပုံအရ ပြောသူမသာ သာသူမပြော ဆိုတာ ရှိတဲ့အတွက် သူများကို မကောင်း ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြောတဲ့သူက အပြောခံရတဲ့သူထက် ဆိုးတယ်ဆိုတာ ပြသရရောက်ပါတယ်။ ဘုရားအဆုံးအမကို လာဖတ်ရင်းနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အကုသိုလ် ရမသွားစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးပေးတာပါ။ နောက်ထပ် သူများနာမည်နဲ့ ကျွန်မဆီမှာ ဘယ်တော့မှ မှတ်ချက်လာမရေးဖို့ ထပ်ဆင့် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။
October 30, 2009 at 11:45 AM Reply
မငယ်နိုင်ရေ မမခင်ဦးမေဆီကနေ သတင်းရလို့ရောက်လာတာပါ။ လာရေးသွားတဲ့သူကိုတကယ်အံ့သြမိပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရော ကိလေသာကင်းနေလို့ ဒီလိုလာရေးရဲတာလားး
October 30, 2009 at 8:30 PM Reply
October 31, 2009 at 2:18 AM Reply
Ma Nge Naing ခင်ဗျာ..
ရေးသားသူနဲ့ မျှဝေသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ..
October 31, 2009 at 7:19 AM Reply
ကျွန်မက အရင်းစိုက်စရာမလိုပဲ သူများစုစည်းပြီး အကျဉ်းချုပ် ဖေါ်ပြထားတဲ့ တရားအနှစ်သာရတွေကို တဆင့် မျှဝေပြီး ကုသိုလ်ယူလိုက်လို့ စာလာဖတ်သူ အများစုမှာလည်း ကုသိုလ်နဲ့ သတိတရားတွေ နှလုံးသွင်းသွားကြတာကို ၀မ်းသာပါတယ်။
့ ကောင်းကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီး တင်တဲ့ ဒီပို့စ် ဖြစ်ပေမယ့်လည်း မကောင်းတဲ့ အကျိုးအဆက်တွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရသူ မခင်ဦးမေနဲ့ အကုသိုလ် လာယူသွား မခင်ဦးမေအတု တို့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။်။
နောက်ထပ် လာလည်ပြီး အားပေးသွားတဲ့ ကိုကျောက်တာ၊ နှင်းဆီပန်းချစ်သူ၊ အဖြူရောင် နတ်သမီးနဲ့ ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် တို့အပါအ၀င် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ဖြစ်သွားသူ အားလုံးကို ကုသိုလ် မျှဝေတာကို ဒါနမြောက်အောင် လက်ခံသွားသူတွေအဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
November 3, 2009 at 4:06 AM Reply
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အတုဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမ facebook လုပ်တော့ သူငယ်ချင်းစာရင်းမှာ မျိုးဝင်းဆိုတာ နှစ်ယောက် မျိုးသိန်းဆိုတာ သုံးယောက်နဲ့ ၀င်းကျော်ဦးဆိုတာလည်း သုံးယောက်တွေ့ဖူးတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံလေးလည်း တော်တော်ဟာသဖြစ်သွားသေးတယ် ကျမလည်း တစ်ယောက်ကိုပြောချင်ရာတွေ ရှောက်ပြောမိပြီးမှ နောက်ဆုံးမှ သိရတာ ကျမပြောနေတဲ့လူက ရည်ရွယ်ပြီးကျမပြောချင်သူမဟုတ်ဘူဆိုတာ အရှက်တောင်ရတယ် နာမည်တူမရှား လူတူမရှားဖြစ်တတ်လို့ပါ။
November 3, 2009 at 7:34 AM Reply
မခင်ဦးမေဆိုတာ ဘလော့ဂ်လောကမှာ တယောက်တည်းရှိပြီး အကုန်လုံး သိကြပါတယ်။ နင်က ဘလော့ဂါ မဟုတ်လို့ သူ့ကို နင်ပဲမသိတာပါ Nee Htay, ကျန်တဲ့ ဒီမှာ စာလာဖတ်သွားသူတွေ အကုန်သိပါတယ်။ နင်ပေးတဲ့ ဥပမာတွေနဲ့ နင်ထင်တဲ့အတိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်က တယောက်က တကယ်အတုပါ။
November 3, 2009 at 7:45 AM Reply